धनियाँले रगत शुद्ध बनाउन मदत गर्छ, अरू के–के छन्् यसका फाइदा ? - Koshi Online
धनियाँले रगत शुद्ध बनाउन मदत गर्छ, अरू के–के छन्् यसका फाइदा ?
बिराटनगर, साउन २
हामीले बिशेषगरी मसला, अचार तथा तरकारीहरूमा प्रयोग गर्ने धनिया तथा यसको हरियो पातको सेवन स्वास्थयका लागी निकै लाभकारी हुने गर्दछ । चिसो मौसममा धनियाको हरियो पातको मानिसहरू भोजनमा बिभिन्न प्रकारले प्रयोग गर्ने गर्दछन । साथै यसको प्रयोग घरेलू उपचारका लागी समेत गर्ने गरिन्छ ।
धनियाको सेवनले निकै फाइथाहरू रहेका छन । धनियाको सेवनले अपच तथा कोलाइटिसबाट मानिसहरूलाइ राहत हुने गर्दछ । टाइफाइड भएको स्थितिमा हरियो धनियाको पातको सेवनले निकै लाभ पुर्याउँदछ । धनियाको सुकेको गेडालाइ पानिमा उमाल्ने र त्यसलाइ छानेर चिसो बनाउने । यस पानीलाइ पिउनाले मानिसहरूको कोलेस्ट्रोल लेभल कम हुन्छ ।